१२९ कम्पनीलाई खनिज उत्खनन अनुमति, कुन क्षेत्रमा कति ? « Bizkhabar Online
१२९ कम्पनीलाई खनिज उत्खनन अनुमति, कुन क्षेत्रमा कति ?
21 December, 2017 9:42 am
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले १ सय २९ वटा कम्पनीलाई खनिज उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ । विगभा अन्तर्गत रहेको खनिज सम्पदा महाशाखाले देशभर रहेका खनिज सम्पदा उत्खनन गर्न १ सय २९ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई खनिज उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अनुमति दिएका खानीमध्ये चुनढुंगा ५२, क्वार्ज चार, रातोमाटो पाँच, कोइला १४, सिसा ३, टल्क १२, फलाम तीन, डोलोमाइट एक, मार्बल तीन, स्ल्याब आठ, म्याग्नेसाइट एक, जिङ्क एक, कायनाइट ९, क्याल्साइट एक र टुर्मालिनका १२ रहेका छन् ।
महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे खनिजका लागि महाशाखाले ३ सय ६४ स्थानमा अध्ययन गरेपनि जम्मा १ सय २९ स्थानमा मात्र उत्खननका लागि अनुमति दिएको जानकारी दिए । ‘सबै खोजतलास गरेका ठाँउमा खनिज हुन्छ भन्ने हुँदैन, खनिज पत्ता लागेको ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्ने हो,’ उनले भने ।
नेपालमा उत्खनन गर्न लागेका खनिजमध्ये अधिकांश स्वदेशी लगानीकै भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ । महाशाखाका अनुसार ४ खनिजको उत्खनन भारतीय र ३ खनिजको उत्खनन चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेका छन् ।
नेपालमा उत्खनन गरिएका खनिजलाई अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण र साधारण गरी ३ भागमा छुट्टाइएको छ । तीमध्ये अति महत्वपूर्णमा सुन, चाँदी, हीरालगायतका बहुमूल्य धातु पर्छन् । महत्वपूर्णमा चुनढुंगा, काइनाइट, फलाम र साधारणमा रातोमाटो, गिट्टी, बालुवालगायत पर्दछन् ।
मुलुकमा उत्पादित काइनाइट, टुर्मालिन र क्वार्जजस्ता खनिज पदार्थलाई मूल्य अभिवृद्धि र प्रविधिको अभावका कारणले २ वर्षदेखि विदेशमा निकासी गर्न नसकिएको महाशाखा प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए /रासस